June 14, 2019 garoowe 0
Dawladda Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay arrimaha siyaasadeed ee kasocda dalka Kenya, waxaana halkaas kulan uga furmi doonaa siyaasiin mucaarad ah, Xildhibaano katirsan labada golle ee dawladda Soomaaliya iyo Madaxda maamulada Galmudug & Jubbaland. Ujeedada
DEG DEG+DAAWO: Farmaajo & Kheyre oo Qorshe Ugub ah wada,Xiisad ka dhalatay Xildhibanad la feeray & Nimcaan Hillaac oo balad qaad muhiim ah sameeyay
June 14, 2019 muqdisho 0
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa kula dardaarmay maamulka Gobolka Banaadir iney sii laba jibaaraan adeegyada muhiimka ah ee Shacabka ay u hayaan. Shirka Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya ee shalay ayaa lagu go’aamiyay
DAAWO: Feysal Cali Waraabe oo arrimo badan ka hadlay shirka Habar jeclo & Xiisad Gobolada Sool iyo Sanaag
June 14, 2019 muqdisho 11
Gudoomiyaha Xisbiga Ucid Faysal Cali waraabe ayaa Maanta kula hadlay Wabaahinta magaalada Hargaysa waxaana uu ka hadlay arrimo badan oo xaasaasi ah. Feysal Cali waraabe ayaa si gaar ah uga hadlay shirka Habar jeclo iyo
XOG: Waa kuma ninka halista weyn ku noqday Xaaf ee uu ka dhaqaaqi waayay
Madaxweynaha dowlad gobaleedka Galmudug, Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa tan iyo markii la doortay waxa uu ka dhamaan wayay khilaaf iyo dagaal siyaasadeed oo u gaar ah maamulkiisa ama mid uu la qabo dhamaan maamulada
DEG DEG+DAAWO: Qaraxyo gil gilay Kenya,shirkii Nairobi oo fashilmay,La Yaabka Kheyre & Maraakiib shidaal oo la Qarxiyay
June 13, 2019 muqdisho 6
Shirka Golaha Xukuumadda Puntland oo uu Shir-guddoominayey Ku-simaha Madaxweynaha, Ahna Madaxweyne Ku-xigeenka Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxaa todobaadkan looga hadlay, Amniga dalka, Safarkii Madaxweyne Ku-xigeenka ee deegaanka Af-urur, Xaaladda Waddooyinka Puntland iyo Warbixino
June 13, 2019 muqdisho 2
Waxaa gebi ahaanba fashilmay shir si wadajir ah oo toddobaadkan madaxda dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka ku dhex mari lahaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Xogo aan helnay ayaa sheegaya in baaqashada Shirkaasi kadib
SAWIRRO: Maxaa Ku Soo Kordhay Qaraxyadii Maraakiibta Shidaalka Iyo Iiraan Iyo Cummaan Oo Ka Hadl?ay
June 13, 2019 muqdisho 0
Dowladda Iiraan waxay sheegtay inay badbaadiyeen 44 Badmaaxiin la socotay Labadii Maraakiibta shidaalka ee saakayto qaraxyadda ku qabsadeen Badda dalka Cummaan ee loo yaqaano Gulf of Oman. Guutadda 5-aad ee Ciiddanka Badda ee saldhigooda dhexe